musha United Kingdom vatambi Chiwetel Ejiofor Diki Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Yedu Chiwetel Ejiofor Biography inokuudza Chokwadi pamusoro peNyaya yehuhucheche hwake, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Mhuri, Musikana / Wife kuva, Lifestyle, Net Kukosha uye Hupenyu hwePamoyo.
Muchidimbu, iyi Nhau yeHupenyu yeSouth Korea nhabvu, kubva pamazuva ake ehudiki, kusvika paakatanga kuve nemukurumbira.
Kuti uve nehupenyu hwako hwekuda kudya, heuno hudiki hwake kune vakuru gallery - chidimbu chakakwana cheChiwetel Ejiofor's Bio.
Hupenyu nekusimuka kweChiwetel Ejiofor.
Ehe, munhu wese anoziva kuti ndiye mumwe wevanonyanya kuita mafirimu vatambi munyika. Nekudaro, havazi vazhinji vanoziva nezvenyaya yeupenyu hwaChiwetel Ejiofor yatakaita zvakanaka kutaura pano nenzira inonakidza. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Chiwetel Ejiofor Yemwana Nhau:
Kutanga kubva, Chiwetel Umeadi Ejiofor akazvarwa musi wa 10 Chikunguru 1977 ku
Forest Gate muLondon, England. Ndiye mumwe wevana vana vakazvarwa kuna amai vake, Obiajulu Ejiofor, uye kuna baba vake, Arinze Ejiofor.
IBritain-Nigerian ndeye chete yeIgbo dzinza rinowanikwa muEast-Nigeria. Akakurira muLondon pamwe chete nehama yakura pamwe chete nehanzvadzi mbiri Zain Asher naKandibe Ejiofor.
Kukura muLondon: Mufananidzo wehudiki weChiwetel Ejiofor nehanzvadzi yake diki.
Mudiki Ejiofor aive nehumwe hupenyu hunofadza kwemakore ekutanga ehupenyu hwake achikura muLondon. Iye ipapo mwana haana kukura mukushaikwa, uyezve aive asina zvikonzero zvekufunga zvakadzama nezve izvo zvinorehwa nehupenyu uye chinangwa chekuvapo kwake.
Chiwetel Ejiofor Mhuri kumashure:
Izvo zvinokwana kucherechedza kuti Ejiofor makore ekuumbika anga asina kumbosiyana neayo evamwe vana vane vabereki vaive vepamusoro-kirasi vagari veLondon. Baba vake vaive chiremba ivo amai vake vaive vemishonga.
Panguva ino, zvakakosha kuti uzive kuti vabereki vaChiwetel Ejiofor vaive vatorwa vakauya kuLondon munguva yehondo yevagari vemuNigeria inozivikanwa zvakare sehondo yeBiafra.
Kunyangwe zvakadaro, pamba paive paive nemoyo wavo chaipo. Sezvo vakadaro vaiwanzo shanya kuNigeria panguva yezororo.
Sangana nevabereki vaChiwetel Ejiofor.
Chiwetel Ejiofor Biography - Maitiro Ekutanga Basa Rake:
Panguva iyo wechidiki aive nemakore gumi nerimwe, iye nababa vake vaive parwendo kuenda kuLagos state kuNigeria mushure mekuenda kumuchato munyika.
Nehurombo, mota yavaifamba nayo yakarova musoro nerori. Ejiofor akapona kupunzika nemavanga anoonekwa pahuma yake. Zvinosuruvarisa baba vake havana kumbozviita kunze kwemotokari vari vapenyu.
Pakunaya kubva parufu rwunokatyamadza rwababa vake, Ejiofor akatanga kuratidza chishuwo chisingaonekwe chekare chekuita zvakanyanya kubva muhupenyu.
Iko kusimudzira kwakamuona achikudziridza yakanyanya kutyaira kuve mutambi panguva yaaingova nemakore gumi nematatu.
Kusvikira izvozvi, Ejiofor akave anoshingairira kutora chikamu mumitambo yechikoro panguva yezvidzidzo zvake kuDulwich Prep London uye gare gare Dulwich College.
Aive akabatanidzwa mumitambo uye madrama panguva yake yechikoro chepamusoro uye mazuva ekoreji.
Chiwetel Ejiofor Bio - Makore Ekutanga Mukuita:
Wakanga uchiziva here kuti mutambi wedhisheni akaenderera mberi nekubatana neNational Youth Theatre uye akapinda muLondon Academy yeMimhanzi uye Dhigiriki Arts? Nekudaro, akasiya wekupedzisira mushure megore rake rekutanga nechinangwa chekutsvaga basa rekuita.
Akatanga zvishoma nezvishoma nekuwana magigs emitambo yepamutambo. Chinozivikanwa pakati pavo chaive chinzvimbo chake chepamusoro mumutambo, 'Othello,' ku 'Bloomsbury Theatre,' muLondon.
Iye prodigy wekuita akamboitawo ku'Theatre Royal, 'kuGlasgow mu1996 asati aita rake rekutanga firimu neiyo movie yeTV' Deadly Voyage 'zvakare mu1996.
Kubatwa kusingawanzoitika kwake achiita mutambo muma1990. Hongu, akambove nekutya.
Chiwetel Ejiofor Bio - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Kuchinja kwebasa raEjiofor kwakauya raingova gore gare gare muna 1997 paakapinda mu'Hollywood 'nekutamba hunhu hwa'James Covey' mumuvhi 'Amistad. '
Kunyangwe hunhu hwaEjiofor hwakanga husiri hunyanzvi mumufirimu, matambiro ake zvakadaro aive akakodzera kucherechedzwa.
Izvi ndizvo zvaakange achitaridzika mumutambo wake wekuHollywood movie Amistad.
Kwakazotevera mafirimu maficha akaona Ejiofor achikura mune ruzivo uye kuzivikanwa. Inozivikanwa pakati pavo yaive 'Blue / Orange' (2000), 'Okwe' (2002), 'Kinky Boots' (2005), uye 'Kutamba paEdge' (2012).
Chiwetel Ejiofor Biography - Kumuka Kune Mukurumbira Nhau:
2013 raive risinganzwisisike gore rakanakisa rebasa raEjiofor. Kutaura chokwadi, 2013 raive iro gore iro Ejiofor akaita chinzvimbo chakanakisa chebasa rake nekutamba hunhu hwa 'Solomon Northup,' mumuvhi, 'Makore12 Muranda.'
Pese paunowana nguva yakaoma kufunga nezve mumwe munhu akaita mukurumbira nekuita chaiko, funga nezvake uye titende gare gare.
Iyo bhaisikopo yakave budiriro huru nevazhinji vachirumbidza Ejiofor nemabatiro aakaita iro basa nenzira inogutsa kwazvo.
Nekudaro akakunda yake yekutanga 'Academy Mubairo' kusarudzwa kweiye 'Akanaka Muiti' mumuvhi. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Chiwetel Ejiofor Musikana Musikana ndiani?
Kure kubva pa-on-screen kuyedza kwake, mafeni uye pfungwa dzinoda kuziva hadzina matambudziko nekuziva musikana waChiwetel Ejiofor pane imwe nguva nguva kunyangwe mutambi achiedza zvakaoma kuchengetedza iro dhipatimendi pachivande.
Iye anozivikanwa kuve anga ari muhukama naNaomie Harris (2000 - 2007) uye akanyeperwa kuti akambodanana naLupita Nyong'o mu2012. Iye anozivikanwa zvakare kuve akamboita rudo rwekudyidzana nemutambi weCanada Sari Mercer.
Chiwetel Ejiofor nhoroondo yekufambidzana. Kubva kuna LR Naomie Harris, Lupita Nyong'o naSari Mercer.
Nekukurumidza kumberi kwaMay 2020, musikana waChiwetel Ejiofor mutambi weAustralia Frances Aaternir. Shiri dzerudo dzakatanga kufambidzana mu2015 uye dzakaita kuwanda kuwonekera kuruzhinji.
Mutambi haana hanya nekuva nevanakomana nevanasikana panguva yekunyora, uye haataure nezvekufamba pasi penzira.
Chiwetel Ejiofor mune anodiwa kumusoro foto nemusikana wake Frances Aaternir.
Chiwetel Ejiofor Hupenyu Hwemhuri:
Chii chaunoziva nezvevabereki vaChiwetel Ejiofor, hanzvadzi uye mukoma? unoziva here kuti ndivo kurudziro iri shure kwekubudirira kwake? gara kumashure apo isu tichifumura chokwadi nezve nhengo dzemhuri yemutambi.
Zvimwe pamusoro pababa vaChiwetel Ejiofor:
Arinze Ejiofor aive baba vaEjiofor. Iye anozivikanwa kuve muimbi ane tarenda akatendeuka chiremba. Aingova namakore makumi matatu nemapfumbamwe ekuberekwa paakafira munjodzi yemumugwagwa iyo mwanakomana wake nerufaro akapona.
Kunyatso kuongorora kweArinze's physiognomy kwaizoratidza kuti anogovera kufanana kunoshamisa nemwanakomana wake anozivikanwa. Iko hakuna kutonga kunze kwekuti vaviri vacho vaive nehukama hwepedyo hwababa nemwanakomana rufu rwusati rwavaparadzanisa.
Ichi chifukidziro chenziyo dzakaimbwa nababa vemutambi.
Zvimwe pamusoro paamai vaChiwetel Ejiofor:
Amai vaEjiofor ndiObiajulu Ejiofor. Iye wemishonga uyo aigara achipa mazwi ekutsigira kuimba dzemurume wake. Nziyo idzi dzaive dzekuWest Africa pop pamwe neAfrobeat.
Obiajulu aive nechitoro chemishonga uko kwaaishanda maawa marefu ekuriritira mhuri mushure mekufa kwemurume wake. Iye zvakare akatanga chikoro - Brightland International Academy muEnugu Nigeria kudzidzisa vana vane mamiriro asina kunaka.
Hazvishamisi kuti ane nzvimbo yakakosha mumoyo waEjiofor uyo asingatomborasikirwa nemukana wekumuudza kuti anomuda zvakadii.
Sangana nemukadzi anodakadza uye anoshanda nesimba amai.
Nezve hama dzaChiwetel Ejiofor:
Sezvatakamboita tsamba yekutanga, Chiwetel ane mukoma mukoma pamwe nehanzvadzi mbiri - Zain Asher & Kandibe Ejiofor. Hazvina zvakawanda zvinozivikanwa nezvemukoma asi isu tinoziva kuti hanzvadzi dzake zvakare vanhu vakakurumbira.
Kutanga naZain, akazvarwa musi we 27th waAugust 1983 muLondon. Iye anozivikanwa Mutori wenhau uyo ​​anoongorora bhizimusi rake neCNN. Uyezve, akaroorwa naSteven Peoples uye vane mwanakomana pamwechete.
Tarisa mutambi pamwe nehanzvadzi yake Zain Asher.
Kudivi rake, Kandibe akatevera nzira dzevabereki vaChiwetel Ejiofor mukurapa. Iye chiremba ane hunyanzvi, mukadzi akaroora pamwe naamai.
Murume wake ndi Dele Arogundade. Vakasunga banga muna Ndira 2016 uye vane mwanasikana pamwe chete anozivikanwa saAmara Sade.
Chiwetel Ejiofor nemukadzi wake Kandibe pazuva remuchato wake.
Kuenderera mberi kuna Chiwetel Ejiofor vanin'ina uye hama, kwete zvakawanda zvinozivikanwa nezvesekuru nasekuru vake, vanamainini nasekuru.
Kana zvekare hakuna marekodhi ehama dzake. Asi isu tinoziva kuti Amara Sade muzukuru wake nepo Dele Arogundade ari mukuwasha wake.
Haasi iye akakwana munyoro here?
Chiwetel Ejiofor Hupenyu hweMunhu:
Takaita zvakanaka kukuudza nezve musikana waChiwetel Ejiofor, nyaya yehucheche, chokwadi chinotungamira mukumuka kwake mukurumbira pamwe nehupenyu hwehukama hwake.
Zvakadii nezvehunhu hwehunhu hwake kunze kwenyika yekuita? gara kumashure apo isu tichifumura chokwadi nezve ake munhu.
Kutanga, Ejiofor's persona yakafanana neyavo vanhu vakazvarwa pasi peCancer Zodiac sign. Ari wepamoyo mutsimba, ane chivimbo, anoongorora, uye akavhurika kuti aburitse chokwadi nezve hupenyu hwake hwega uye hwakavanzika.
Asides kubva pakuita, Ejiofor anoda kufamba nechikepe, kuverenga mabhuku, kuona mabhaisikopo, pakati pezvimwe zvinofarirwa uye zvinokuvaraidza.
Chiwetel Ejiofor Mararamiro:
Unoziva here kuti Chiwetel ane mari inofungidzirwa kuti inosvika $ 12 miriyoni panguva yekunyora iyi biography? Kwakatangira hupfumi hwemutambi kunobva pane kwake pa-screen kuedza pamwe nezvimwe zvinomupa izvo zvaasati azivise.
Kutenda kune yake hombe hupfumi hwaro Ejiofor haana matambudziko ekushandisa muhombe kurarama hupenyu hwoumbozha senge dzimwe nhema dema dzeHollywood - Will Smith & Denzel Washington.
Kunyangwe zvisiri zvakawanda zvinozivikanwa nezve imba yemutambi muLondon, isu tinoziva kuti anokwira mota dzinodhura.
Ona ndiani akakosha madhora gumi nemaviri kubva muna Chivabvu 12.
Chiwetel Ejiofor Chokwadi:
Kuputira yedu Chiwetel Ejiofor's biography, hezvino zvishoma-zvinozivikanwa kana zvisinga zivikanwe chokwadi nezve mutambi.
Chokwadi # 1 - OBE:
Iwe unoziva here kuti Ejiofor aive muna 2008 akagadzwa Officer weOrder yeBritish Empire naMambokadzi Elizabeth II?
Mubairo uyu waive mukucherechedza mabasa ake kune hunyanzvi? makore akazotevera akakwidziridzwa kuna Commander weOrder yeBritain Humambo panguva ye2015 Birthday Rukudzo.
Zvingadai zvakatonhora kana akapfeka nguwo dzemauto handiti?
Chokwadi # 2 - Anobatsira mabasa:
Chiwetel akakura pasangano rerubatsiro uye akaita mabasa erupo mazhinji muNigeria. Chii chimwe? iye anogamuchira iyo 'Global Vimbiso Mubairo' ne 'GEANCO Foundation' mubairo webasa rake rezvemagariro.
Chokwadi # 3 - Kugadzirira kweFirimu:
Havasi vazhinji vanoziva kuti Ejiofor inogadzirira zvakawanda pasati paburitswa bhaisikopo. Kubudirira kunotsanangura chikonzero nei achizivikanwa semutambi anokwanisa kuita zvinhu zvakawanda.
Unoziva here kuti mutambi asati aonekwa pamakore gumi nemaviri ari muranda, akadzidza kutora svutugadzike uye kuridza hwani. Akaitawo mabasa mazhinji akaoma epanyama aine chinangwa chekuonekwa chaiye mumuvhi.
Isu tinogona kungofungidzira nhamba yemavhiki yaakaita kuti aite.
Chiwetel Ejiofor anogovera iro rimwe gore rekuzvarwa - 1977 aine nyeredzi senge Orlando Bloom, Shakira, naMichelle Gellar. Sezvineiwo, 1977 raive gore iro epic varaidzo mafirimu senge Iyo Nyeredzi Inozvarwa, King Kong, uye Annie Hall yakarova mafirimu.
Zita rizere Chiwetel Umeadi Ejiofor
Zuva rekuzvarwa 10th July 1977
Nzvimbo yekuzvarirwa Gedhi Sango muLondon, England
Baba Arinze Ejiofor.
Amai Obiajulu Ejiofor
Vanun'una Zain Asher naKandibe Ejiofor.
Hama Steven Peoples (inlaw), Dele Arogundade (inlaw) naAmara Sade (muzukuru)
mudiwa Frances Aaternir
zvinhu Kuverenga uye Chikepe
Ndatenda nekuverenga ichi chidimbu chinonakidza paChiwetel Ejiofor's biography. At ChildhoodBiography, isu tinozvirumbidza pakuendesa biography chokwadi nekurongeka uye kurongeka. Wati waona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka? Ndokumbirawo usazeze kutaura nesu kana kusiya meseji mubhokisi remashoko.